कुबेतको धनाड्य सुल्तानकी श्रीमती र छोरीको प्या-स मेटाएर काठमाडौमा साढे तीन तले घर ! – Jagaran Nepal
उनको पुर्ख्यौली घर भने धादिङ हो । ‘यस्ले कसरी घर बनायो भनेर हामीपनि चकित छौ, उनलाइ नजिकवाट चिनेका साथीले भने– घरभीत्रै भाडा माझेर बस्नेले यत्रो प्रगति गरेको देखेर हामीपनि आश्चर्यमा परेका छौ ।
’उनलाई गाँउले भन्छन् ।भाग्यमानीको भूतै कमारो ! राजकुमारका लागि कुबेतको धनाड्य ‘सुल्तान’ को घरभित्र भाडा माज्ने, खाना पकाउने र सुल्तानका श्रीमतीका कपडा धुने काम पाएको थियो । यसैबाट भाग्य कोर्ने मौका मिल्यो ती युवकलाई ।
श्रीमानको ‘सुन्तुष्ट बनाउने’ ध’न्दा बारे उनकी श्रीमती भने बेखवर छिन । म्यानपावर कम्पनी हो जतिखेर पनि जानु पर्ने हुन सक्दछ भन्दै उनले श्रीमतीलाई विश्वस्त बनाएका छन् ।उनको ड्युटी कहिले कहिं चौविसै घण्टा समेत चल्ने गरेको छ ।
मदिरामा उनको खर्च हुन्न, खानेकुरा ‘जागिर’ सँगै पाउने भएपछि उनको कमाई पनि मोटै छ अहिले। श्रीमती र बच्चाबच्ची खुसी राखेका छन् उनले । व्यक्तीगत गोपनियताको लागि उनको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।